Jasmine: esi edozi osisi na mba - Ọnọdụ maka Jasmine - 2020
Otu esi akụ na-eto jasmine na dacha
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eche echichemgbe ọ ka mma ịkụ osisi Jasmine, ụdị nlekọta dị mkpa maka ifuru, otu esi eme ka mmiri na mmiri doo ya. N'isiokwu a ị ga-enweta azịza maka ajụjụ ndị a ma chọpụtakwa ụfọdụ ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere Jasmine.
Ị ma? E nwere ihe ama ndi mmadu: oburu na jasmine nwere ike onwa Mee 9, mgbe ahu ka oge na-emeso osisi ndi nwere ihe ojoo.
Kedu otu na mgbe ka ọ ka mma ịkụ mkpụrụ jasmine
Olee otú jasmine mmiri
Jasmine fatịlaịza, otú na mgbe ị ga-eri nri osisi ahụ
Mgbe ọ dị mkpachaa jasmine oge na otu esi eme ya
Ihe dị mkpa ka ị mara banyere nsị osisi
Mmeputakwa atụmatụ nke jasmine, dị ka ịcha
Ọnọdụ nkasi obi maka jasmine, nhọrọ nke ọnọdụ na ọnọdụ okpomọkụ
Jasmine bụ osisi shrub nke osisi olive, nke dị na eriri ọkụ nke abụọ ahụ. A na-akọ ya dị ka osisi ornamental na okooko osisi mara mma.
Ọ dị mkpa! Ejigharị jasmine na akpaaka, nke a na-akpọkarị "ubi jasmine."
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ebe ị ga-akụ jasmine na ihe okpomọkụ ga-adị mma maka ya, mgbe ahụ, ozi dị n'okpuru ebe a bụ maka gị.
N'ihi na osisi nwere oghere oghere na ezigbo ọkụ. N'okpuru ndò shrub ahụ ga-etolitekarị, mana okooko agaghị adị ogologo ma buru ibu.
Cheta na osisi ahụ adịghị amasị ala mmiri mmiri. Mgbe ị kụrụ, jide n'aka na saịtị ahụ abụghị ọkwa mmiri dị elu.
Obere kachasị okpomọkụ nke jasmine na-adịgide adịgide bụ 6 Celsius. Ya mere, n'oge oyi, a ghaghị ịkụnye osisi ma ọ bụ kwaga n'ụlọ. Mmiri kacha mma maka osisi bụ 18 Celsius C (na oyi, okpomọkụ dị ọkụ bụ 8-10 ° C).
Ịghọta mgbe ị ga-akụ Jasmine na mba ahụ n'oge opupu ihe ubi, ịkwesịrị ịmalite ọ bụghị naanị site na ntuziaka, kama site na ọnọdụ ihu igwe n'ezie.
A na-eme akuku Jasmine n'ọnwa Mee, nke mere na osisi ndị ka mma biri ala. Ọ kacha mma ịkụ osisi ohia na mgbede na ihu igwe ojii.
Ị nwere ike akụ jasmine na ọdịda, na Septemba, ma na nke a, ọ ka njọ ịgbanye mgbọrọgwụ.
Kwadebere oghere maka ohia, nke kwesiri ibu karia usoro mgbidi. A na-enyocha mgbọrọgwụ maka ọnụnọ ọrịa na mmebi. Ọ bụrụ na e nwere, a ga-ewepụ ha. A na-agbanye ụwa ma ọ bụ ịnweta ngwongwo ọgaranya n'olulu. Ọ dị mkpa ịkụ mkpụrụ n'ụzọ dị otú ahụ na olu mgbọrọgwụ dị na ala (ọ bụrụ na i gwuru n'ime ya, ọ nwere ike ire ere). Mgbe akuku, ala nke gbara osisi gburugburu na-eme ka mmiri sie ike. Iji chebe mmiri mmiri ka mma, a na-ejide ya na peat ma ọ bụ akwụkwọ akọrọ (ọkpụrụkpụ nke mulch ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 3-4 cm).
Ọ dị mkpa ịhọrọ ala kwesịrị ekwesị nke jasmine ga-enwe ahụ iru ala.
N'ihe nke mkpụrụ na-ewere ngwakọta nke ala ojii, ash na humus. N'okwu a, ihe dị ka kilogram 5 nke chernozem were ihe dị ka 1 n'arọ nke humus na uyi. Ọzọkwa, echefula banyere drainage, nke a na-etinye na ala nke olulu n'oge akuku. Iji mee nke a, ị nwere ike iji nkume ma ọ bụ gravel.
Jasmine anaghị achọ nlekọta a kapịrị ọnụ, ma usoro mgbatị mmiri ga-agbasiri ike, nke mere na osisi anaghị amalite ịṅụ mmiri.
Osisi enweghị mmiri ozuzo, n'ihi ya, ị ga-agba mmiri na oge. Tupu okooko, ịkwesiri ịkụ osisi ahụ ka ọ dịkarịa ala ugboro abụọ. Mgbe jasmine na-agbaji, ala n'okpuru ohia ka na-ezo.
Ọ dị mkpa! Site na enweghị mmiri mmiri, Jasmine na-ahapụ oge ha na-emegharị ma gbanwee edo edo.
Na mgbakwunye na ịgbara mmiri, ọ dị gị mkpa kwa izu ịtọghe ala ma wepu ahịhịa ndị na-eto eto na nso osisi.
Na mgbakwunye na atọ na ịtọ ala, fatịlaịza dị mkpa maka shrub, nke a ghaghị itinye na ala. Ya mere, anyị ga-aza ajụjụ ọzọ karịa ifatilaiza jasmine na mgbe ị chọrọ ime nri. N'oge opupu ihe ubi, a na-amị jasmine na nri, diluted na mmiri (1:10 ruru). Ya mere, ị na-eri nri osisi ahụ tupu mmalite nke uto na mmepe.
Afọ abụọ mgbe ị kụrụ, ọ dị gị mkpa ilekọta jelmine jupụtara na ịnweta. Na njedebe a, na njedebe oge opupu ihe ubi, ngwakọta 15 g nke urea, 30 g nke superphosphate na 15 g nke potassium sulfate na-amanye n'ime ala, nke a na-diluted na 10 lita mmiri.
Ị ma? Site na okooko osisi Jasmine na-esi ísì ụtọ nwere mmanụ dị mkpa, nke a na-eji mee ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na mmanụ dị iche iche.
A na-emecha Jasmine kwa maka ebumnuche ọcha na iji nọgide na-ahụ osisi.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị gafechaa-egbutu obere ohia, mgbe ahụ, ọ ga-agba oge n'afọ ọzọ.
Osisi kwachaa osisi a rụrụ na mmiri (na mbubreyo April - mmalite May). N'otu oge ahụ, a na-eme ka alaka ndị dị na ya dị ntakịrị, nke a na-eme ka ọtụtụ ụmụ na-eto eto n'oge okpomọkụ.
A na-emecha jupụtachaa jasmine naanị mgbe okooko gasịrị, shrub n'onwe ya enweghị ike ịnagide mwepụ nke Ome mgbe ọ na-agba.
N'okpuru kwachaa dara ọrịa, na-adịghị ike ma na-akọrọ alaka. Ikwesiri igbutu Ome ndi na eto n'ime ohia.
Ọ dị mkpa! Mgbe okooko, ịkwesịrị iwepụ inflorescences okooko osisi iji zọpụta ike nke osisi ahụ.
Echefula nke ahụ N'otu oge n'ime afọ 4, ịkwesịrị imelite osisi ahụ kpamkpam, ka ị na-egbutu osisi Ome. Ná mmalite May, a na-eme ka okpuru atọ dị mkpirikpi dị mkpirikpi 30 cm, a na-egbutu mgbọrọgwụ ndị ọzọ na mgbọrọgwụ. Mkpụrụ osisi kwesịrị ịhazi nkwụ ubi. Osisi ohuru a na - amalite ngwa ngwa na - eto eto ma na - agba ya.
A na-ebugharị Jasmine ụlọ na March. Ndị na-eto eto chọrọ ka a na-atụgharị ha kwa afọ, na ndị okenye kwa afọ atọ.
Maka osisi ndị na-eto eto, a na-eji ihe nchịkọta ndị na-esonụ na-atụgharị: ụrọ-ala turf, ahịhịa ala na ájá dị nha.
Maka osisi ochie 2 ugboro ego ụrọ-turf n'ala, mgbe agwakọta ala.
Ị ma? White jasmine bụ ifuru mba nke Pakistan, ebe a maara ya dị ka Chambeli.
A na-agbasa Jasmine n'ụzọ atọ: mkpụrụ osisi, ịtọgbọ na grafting.
Ka anyi malite site na ozuzu ozuzu. Iji belata osisi ahụ, were mma dị nkọ ma kpochapụ ya. Gbanyụọ oge ịgba ọsọ apical ka anya 3 wee laa. Anyị na-eme ka mkpụrụedemede dị elu karịa 1 cm n'elu peephole (elu ga-ebipụ), obere ala - dị n'okpuru peephole. E wepụsịrị akwụkwọ ndị dị n'okpuru osisi ahụ, na-ahapụ naanị mkpụrụ osisi dị n'etiti, nke ọ dị mkpa ka a gbutuo ya site na 1/3. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-akụ ọka ahụ na ngwakọta ụwa (chernozem + osimiri ájá).
Mkpụrụ ahụ ekwesịghị ijigide mmiri, ma ọ bụghị ya, mkpụrụ osisi ahụ ga-ere. Maka akuku, ha na-ewere obere ite, nke na-eme ka ụrọ gbasaa, jupụta ngwakọta ụwa ma kụọ osisi na-eme ka ọ dịkwuo n'etiti osisi. Site n'elu, a na-ekpuchi ite ahụ na ite iko ma tinye ya na ebe dị ọkụ (ma ọ bụghị n'okpuru anyanwụ, ma ọ bụghị na seedling ga-adiahade). Mgbe ị kụrụ, ọ dị mkpa ka ị na-agbanye mmiri na ikuku na-eto eto. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ kwesịrị ịdị na 19-20 19C.
Ọ dị mkpa! Na seedling pulite ngwa ngwa, ị nwere ike itinye ya na mmanụ aṅụ ngwọta (a ngaji mmanụ aṅụ kwa 1 liter mmiri). Ihe ngwọta dị otú ahụ bụ ezigbo stimulator.
Mmeputakwa site na ndina Iji mee nke a, dị nso na ite ahụ na nne osisi, tinye onye ọzọ ma jupụta ala, nke na-ekwughachi ihe mejupụtara ala ahụ n'ime ite. Gwa ya ma gbanye ya na ite nke abụọ. Ghichaa ogbugbo ahụ ebe a ga-ekpuchi oyi akwa. Wụsaa ala, wụsa ma kechie ihe nkiri. Beechapụ njedebe nke oge ịse ahụ nke mere na naanị 2-3 epupụta fọdụrụ na ya. Mgbe usoro a gbanyesiri mgbọrọgwụ ike, a ga-ekewapụ ya site na nne ohia ma megharia gaa ebe ọzọ.
Mkpụrụ Jasmine na-aba ụba dị ka àgwà dị iche iche na-efu ma pasent nke mkpụrụ osisi dị obere.
N'ịmara nhọrọ ozuzu nke Jasmine na ntụziaka maka otu esi elekọta osisi ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ifuru osisi mara mma n'ubi gị ma nwee ọganihu ya.